Nhaurirano Pakati peZanu PF neMDC Dzotandadza
Ndira 25, 2008
Hurukuro pakati peZanu PF neMDC dzava kuratidza sedzisisina kure kwadzichasvika. Izvi zvakabuda pachena nemusi weChitatu apo bato rinopikisa reMDC inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai, rakarambidzwa kufora mumigwagwa yemuHarare.
Vamwe vatungamiri vebato iri vakasungwa uye vanhu vakawanda vakarokwa nemapurisa. Vamwe vari kuona sekunge hurumende isiri kutevera zvakawiriranwa munhaurirano dziri pakati peMDCneZanu PF.
Mukutsvaga mhinduro Studio 7 yabata vaongorori vezvematongerwo enyika VaTapera Kapuya, avo vari kushanda pari zvino nesangano reNational Endowment for Democracy, iro rine mahofisi muno muWashington DC, pamwe naVaSydney Chisi, Director veYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe.
Vaviri ava vaudza Jonga Kandemiiri weStudio 7 kuti vanowirirana kuti MDC yava kuona zvino kuti yakabatwa kumeso nehurumende yeZanu PF pakubvuma kuvandudza chikamu chebumbiro remitemo yenyika uye kupinda muhurukuro, idzo dzisina chimuko.